Soomaalida ku nool wadanka Denmark oo soo dhaweyeeyay talaabo la xariirta Covid19. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Soomaalida ku nool wadanka Denmark oo soo dhaweyeeyay talaabo la xariirta Covid19.
Soomaalida ku nool wadanka Denmark oo soo dhaweyeeyay talaabo la xariirta Covid19.
Dowladda Denmark ayaa maanta oo isniin ah ku dhawaaqday waqtiga ugu dambeeya ee ay rajeyneyso in la wada talaalo dhamaan dadka ku nool dalkaasi Denmark, arintaasi oo si weyn ay ugu farxeen qoysaska Soomaalida.
Sida ay qurbaha.net u sheegeen qaar ka mid ah qoysaska Soomaalida ee ku nool Denmark waxa ay rajo wanaagsan ka sameeyeen in dhawaan wadanka uu isku fur furmi doono kadib markii maanta madaxda Dowladda Denmark ay ku dhawaaqeen in ay rajeynayaan in talaalka Covid19 uu wada gaaro dadka waaweyn ee raba talaakka ugu dambeyn 27 Juni ee sanadkaan.
Taariikhdaani ayaa ah todobaad ka hor xiligii horay loo qiyaasayay waxaana sababta loosoo hormariyay ay la xariirtaa helida talaalka Pfizer/Biontech oo si wanaagsan u gaaray dalka Denmark, waxaana qaadashada talaalka ee bulshada waaweyn ay keeneysa in dalka ee isku fur furmo dadkana loo ogolaado in ay safaro galaan.’
Mohamed Ali, Abdi Hussein iyo Sadia Gerweyne oo la hadlay Qurbaha.net ayaa sheegay in rajadaani ay u wanaagsantahay dhamaan bulshada ku nool dalkaasi si loo ilaaliyo bad qabka dadka uu u daranyahay infekshinka.
“ Wax ay keeneysa in ay fududaadaan safarada iyo is dhegalka bulashada, waa sax wadanka weli wuu sii xirnaan doona lkn hadii talaalka la wada qaato waxa ay dhalineysa in ay fududaato” ayay tiri Sadia.
Hay,adda Caafimaadka Denmark ayaa sheegtay in talaalada Pfizer/Biontech ay u muuqdaan in ay ka sareeyaan sidii la filayay taasi oo dhalisay in rajadu ay kasoo hormarto waqtigii la qiyaasayay.
Denmark waxaa ku nool qoysas fara badan oo Soomaali ah oo kala degan gobolada kala duwan ee dalkaasi, kuwaasi oo si wanaagsan ugu xiran fariimaha caafimaadka ee dowladda.
Previous articleQoyskii Soomaalida ee Guriga qasabka looga saaray oo deg deg u heley lacag ay Guri ku iibsan karaan.
Next article“Waxaan arkaa in xitaa abayaasha Soomaalida ay raadinayaan macluumaad ku saabsan autism iyo Asperger” Hodon Toosh.